Clicker ho an'ny alika: inona izany ary ahoana ny fampiasana azy hampiofanana ny biby fiompinao | Tontolo alika
Mpanazatra alika maro, ankoatry ny tompona biby, dia mampiasa a clicker ho an'ny alika ho fanampin-javatra rehefa mampianatra tetika na fitondran-tena mety amin'ilay namantsika tongotra efatra. Na izany aza, misy karazany samy hafa eny an-tsena ary mahita ny mety indrindra, rehefa tsy azonao antoka hoe inona izany dia mety ho sarotra.
Noho izany, etsy ambany dia tsy hiresaka momba ny clicker ho an'ny alika fotsiny isika, fa koa ny fampiasana azy, ny karazana misy ary raha mahomby amin'ny alika rehetra izany. Vakio hatrany raha te hahalala koa.
1 Inona no kitihana alika ary inona no ilana azy?
2 Karazana clicker ho an'ny alika
2.2 Miaraka amin'ny kiririoka famaliana
2.3 Amin'ny feo mahery
2.4 Ny loko
3 Fomba fampiasana clicker hampiofana alika
4 Mahomby ve ny tsindry hampiofanana alika?
5 Aiza no hividianana clicker alika
Inona no kitihana alika ary inona no ilana azy?
Diyife Clicker ho an'ny ...
Raha ny marina dia misy fomba maro hamaritana ny atao hoe clicker alika, fa ny iray amin'ireo mora takarina dia ity: a boaty plastika kely izay, rehefa voahidy, ny ataony dia toy ny tsindry, izany no anarany. Ity fitaovana ity dia ampiasaina hanamafisana ny fianarana tsara, karazana feo fantatry ny alika rehefa nahavita zavatra tsara.
Na izany aza, azo ampiasaina amin'ny fomba ratsy ihany koa izy io, izany hoe, amin'ny fahatakarana fa ny alika rehefa maheno ny feo dia mahalala fa misy zavatra tsy mety, ka mahatonga azy io ho lasa adin-tsaina, mitebiteby ary afaka mihetsika amin'ny fomba ratsy.
Karazana clicker ho an'ny alika
Eny an-tsena, rehefa mandeha mitady clicker ho an'ny alika ianao dia hahita karazana maro amin'izy ireo, ary ny fisafidianana iray mety dia mahomby amin'ny alika na mahita azy ho kilalao hafa fotsiny.
Mifantoka amin'ny mpanazatra alika sy mpanazatra. Ity karazana clickers an'ny alika ity dia vita amin'ny fitaovana mateza sy matevina kokoa hisorohana ny fampiasana azy io hatrany am-piasana amin'ny fanaovana azy.
Miaraka amin'ny kiririoka famaliana
Kiririoka sy kiririoka ho an'ny...
Ity karazana clicker alika ity dia manana fiasa roa. Ary io dia tsy hoe manana bokotra "tsindry" fotsiny fa afaka misioka miaraka aminy mba hanatrehan'ilay biby na hananatra azy noho ny antony tsy fantatra.
Amin'ny feo mahery
Ho an'ireo alika mora mikorontana, na ireo izay efa be taona na manana olana amin'ny fihainoana, ireo no tsara indrindra, indrindra satria ny feo avoakany dia avo kokoa.
Firenena 7 loko tsara indrindra amin'ny...
Vita amin'ny plastika mafy fa miaraka amin'ny loko, mety ho safidy hampifanaraka ny biby ampianarinao izy. Raha manana alika roa na roa koa ianao dia afaka manana iray isaky ny iray (satria, na dia mitovy feo aza izy rehetra, indraindray misy ny tsy fitovizany).
Julius-K9 162BOR-2 -...
Izy io dia miavaka amin'ny maha-zavatra kely manana bokotra afovoany. eFA endrika boribory lavalava mba hifanaraka tsara kokoa amin'ny tanana amin'ny fomba ahafahanao manafina azy mba tsy ho hitan'ny alika.
Fomba fampiasana clicker hampiofana alika
Raha hampiasa clicker ho an'ny alika, ny zavatra voalohany ilainao dia ny mahafantatra ny fomba hampiasanao azy, raha tsara izany na ratsy. Raha ratsy io, ny teny fanalahidy izay hiaraka amin'ny feo dia TSIA, mba hahafahanao mamantatra an'io feo io amin'ny zavatra tsy tokony hataonao.
kosa, Raha zavatra tsara io dia tsy maintsy fararanao aloha izay hitranga. Ohatra, ny zavatra tsapany.
Vantany vao voafidy ny fiofanana dia tsy maintsy mifantoka amin'io fotsiny ianao ary mifidy teny iray izay, rehefa miteny izany dia takatry ny alika fa misy zavatra tsy maintsy ataony. Noho izany, mipetraka, mipetraka na mipetrapetraka ny sasany amin'ireo voafidy. Fa tsy ireo ihany. Aza hadino ny misafidy iray izay tsy ampiasainao matetika mba tsy hampifangaro azy.
Ankehitriny, tsy maintsy mandrangitra azy ianao hanao izay tianao, izany hoe mahatsapa. Azonao atao izany, ohatra, amin'ny alàlan'ny fampisehoana azy amin'ny rivotra manery azy hipetraka mba hahafahanao manohy mijery ilay zavatra. Amin'izay fotoana izay, teneno ny teny ary kitiho ny clicker.
Tsy ho takany amin'ny voalohany, fa rehefa ataonao imbetsaka izy dia ho tsapany fa misy ny fifandraisana misy eo amin'ny teny, ny feo sy ny zavatra ataony, ary hiafara amin'ny fanaovana azy ho mandeha ho azy, tsy mila ilay alika clicker
Mahomby ve ny tsindry hampiofanana alika?
Alao an-tsaina ny fomba fanabeazana. Izy io dia misy andiana hetsika izay, raha ny angon-drakitra efa nohadihadiana, dia miasa amin'ny ankizy. Saingy miasa amin'ny fomba mitovy daholo ve izany? Mitovy ve ny fianarany? Ny marina dia tsia.
Ka izany no mitranga amin'ny clicker sy alika. Samy hafa ny biby rehetra: ny faharanitan-tsainy, ny fironana mialoha, sns. Ataon'izy ireo ho fitaovana ilaina tokoa ny mifampiresaka amin'ny biby fiompinao sy mampianatra azy izay tadiavinao. Fa amin'ny fotoana hafa dia tsy mandeha izany.
Ny mazava dia maro ny mpampiofana mahita azy io mandaitra amin'ny fampiofanana alika. Saingy hisy ny biby izay tsy mamaly an'io karazana fanentanana io ary mila mitady ny hafa ianao.
Amin'ity tranga ity dia ianao no mahalala ny alikao indrindra. Raha mieritreritra ianao fa mety ho mora ekena amin'ireo fanentanana ireo, tsy misy isalasalana fa ny clicker for dogs dia afaka manampy anao hanafohezana bebe kokoa ny fotoana fiofanana, satria hianatra haingana kokoa izany. Raha tsy izany dia tsara kokoa ny manao raha tsy misy izany ary mitady zavatra hafa izay afaka manampy anao hifantoka sy hamantatra izay tianao hampianarina.
Aiza no hividianana clicker alika
Raha aorian'izay rehetra nolazainay anao dia heverinao izany mila clicker ho an'ny alikanao ianao, avy eo izahay manome soso-kevitra fivarotana sasany ahafahanao mividy azy ireo.
Amazon: Mety ho hitanao ao ny karazany isan-karazany, na amin'ny endrika na amin'ny habe ary endrika. Tsy mitovy ihany koa ny vidin'izy ireo, izay mifanaraka amin'ny teti-bola.
kiwiko: Amin'ny maha fivarotana biby fiompy manokana anao dia iray amin'ireo kojakoja alika azonao vidiana ny tsindry alika. Tsy dia manana marika firy izy io, fa manana ny ampy mba hahitana ny marina araka ny fampiasana sy ny karazany ny alika.
Matetika: Iray amin'ireo fivarotana biby fiompy hafa azonao tsidihina hividianana clicker alika dia i Tíanimal. Ao anatin'izany no hahitanao marika sy volavola vitsivitsy, ny mpivarotra tsara indrindra ary ankafizin'ny mpampiasa.
zooplus: Ao amin'ny Zooplus dia tsy hahita karazany maro ianao, satria tena voafetra ny katalaoginy. Fa ny ananan'izy ireo dia ireo izay ividianan'ny olona matetika, ka fantatrao fa be mpampiasa io.
Eo am-pelatananao izao dia misafidy clicker ho an'ny alika na misafidy fanampiana hafa amin'ny fampiofanana sy ny fiofanana amin'ny kanin.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Clicker ho an'ny alika